चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीलाई अचानक यस्तो के भयो ? (भिडियो सहित) -
Home मनोरन्जन चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीलाई अचानक यस्तो के भयो ? (भिडियो सहित)
चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीलाई अचानक यस्तो के भयो ? (भिडियो सहित)
नेपाली गित सँगितकी चर्चित एवं लोकप्रिय गायीका हुन बिष्णु माझी । उनले गायका धेरै गितहरु करोड क्लबमा प्रबेश गरेका छन साथै उनले गित गाएर लिने पारिश्रमीकबाट पनि निकै नै चर्चाको शिखरमा रहेकी छिन । उनले अहिले एउटा गित गाएबापट २ लाख रुेपैया पारिश्रमीक लिएको भनेर सँगित बजारमा निकै चर्चा र बहसको बिषय पनि बन्दै गएको छ ।
उनै चर्चित एवं लोकप्रिय गायिका बिष्णु माझीको बिल्कुलै नयाँ गितको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ ।
सामाना म्युजिक क्रियशन युटुब च्यानलमार्फत सार्बजनिक भएको ‘पानी पाए पछि’ बोलको गितको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भए सँगै यो गितको चर्चा चुलिन थालेको छ । सामाना शाहको शब्द सङ्कलन र केशव श्रेष्टको अभिनय रहेको लोकदोहोरी गीत ‘पानी पाए पछि’को भिडियो यु ट्युव मार्फत सार्वजनिक भएको हो ।
चर्चित एवं लोकप्रिय गायिका बिष्णु माझी र भगीरथ चलाउनेको स्वरमा रहेको गीत ‘पानी पाए पछि’मा भगीरथ चलाउने आफैले गितको मन छुने लय सिर्जना गर्नुभएको छ । बिनोद बाजुराजुलीको एरेञ्ज रहेको गीतको रेकर्डिङ राजेन्द्र बाजुरालीले गरेका छन् । अञ्जली अधिकारी र केशव श्रेष्टको अभिनय रहेको गीतको भिडियोलाई सिर्जन बरालको निर्देशन छ ।
राजेश घिमिरेको छायाँकन रहेको गितको भिडियोमा अमृत चापागाईंको सम्पादन छ । निरज श्रेष्टको सहनिर्देशन रहेको भिडियोको फोटोग्राफर आयुष सापकोटा रहेका छन् । प्रेम कहानीमा आधारित कारुणीक भिडियोको दृष्य निर्माण जनता डिजिटल फिल्मस् नेपालले गरेको हो । गितले टिक टक फेसबुकमा निकै चर्चा कमाईरहेको छ । हेर्नुहोस गितको पुरा म्युजिक भिडियो ।